बिदेश मा हुनेको लागि खुसिको खबर ह्यतै बड्यो बिदेशी मुद्रा को भाउ यस्तो छ आजको भाउ ! – Sapana Sanjal
July 10, 2021 138
Sapana Sanjal : बिदेश मा हुनेको लागि खुसिको खबर ह्यतै बड्यो बिदेशी मुद्रा को भाउ यस्तो छ आजको भाउ ! बिदेश मा हुनेहरुको लागि सुनौलो अबसर रियाल,देखि अमेरिक डलर सम्म को ह्यत्तै बड्यो भाउ, काठमाडौ असार २६ बिदेश मा हुनुहुन्छ? बिदेश बाट अब पैसा पठाउनुहोस यति धेरै बढ्यो बिदेशी मुद्राको भाउ आज शनिबार कुन देशकाे कति छ त नेपाल रास्ट्रबैंकको भाउ , जान्नुहोस यस्तो छ आजको बिनिमय दर
आज अमेरिकी डलर १ को खरिददर १ सय १९ रुपैयाँ १३ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय १९ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ । यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १ सय ४१ रुपैयाँ २५ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ४१ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ । युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १ सय ६४ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रिदर १ सय ६५ पैयाँ ६५ पैसा रहेको छ ।
कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ९५ रुपैयाँ ६८ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ९७ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ । बहराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय १५ रुपैयाँ ९९ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय १७ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ । यि सबै नेपाल राष्ट्र बैँकले ताेकेकाे विनिमयदर हाे । जानकारीका लागि सेयर गर्दै जानू हाेला ।
युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ४३ पैसा छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ । मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ ४३ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको छ ।
साउदी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ ।
Prevपुदिनाको सेवन गर्ने गर्नु भएको छ ? छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला,यस्तो बन्दै छ पुदिना सेवन गर्नेहरु….
Nextट्वाइलेट बसिरहेको बेला पहिरोमा पुरिएकी वालिकाको उपचारको क्रममा मृत्यु